‘आफू पनि घरबाहिर ननिस्कनु, अरुलाई पनि घरमा आउन नदिनु’ डा. मनोहर बुढाथोकी | Everest Times UK
‘आफू पनि घरबाहिर ननिस्कनु, अरुलाई पनि घरमा आउन नदिनु’ डा. मनोहर बुढाथोकी
कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्व त्रस्त छ । बेलायतमा मात्र यो पंक्ति तयार पारिरहँदा सो भाइरसका कारण ३३५ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ६ हजार ६५० मा सो भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । हालसम्म यो भाइरसको उपचार पत्ता लागेको छैन तर यो रोग लाग्न नदिन विभिन्न उपायहरु चिकित्सक, वैज्ञानिक र सरकारले जारी गरेका छन् । ती उपायहरु र नेपालीहरुले कसरी सजगता अपनाउने सम्बन्धमा बेलायतको लिभरपूलमा कार्यरत जनरल प्राक्टिसनर (जीपी) तथा नेप्लिज डक्टर्स एसोसियशन युकेका सदस्य डा. मनोहर बुढाथोकीसंग नेपाल पत्रकार महासंघ युकेका अध्यक्ष नरेश खपांगीले गरेको कुराकानी ः
अर्कोतर्फ कतिपय नेपालीमा सरकार र स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सुझाव अटेर गरी ‘मदर्स डे’मा वृद्धावस्थाका आमासित भेटेको पनि पाइयो ।
त्यो गलत हो । आफू र आफन्त दुवैको लागि यस्ता कार्य ठीक होइनन् ।
सरकार र स्वास्थ्यकर्मीहरुले दिएको सुझाव मानिदिनुपर्यो । घरबाहिरका मानिसहरुसितको सम्पर्क घटाउनु पर्यो । बरु झ्यालबाटै कुराकानी गर्नुहोस् तर आफ्नो घर बाहिरका मानिसहरु आफन्त नै भए पनि घर आउन नदिनुहोस् । यो भाइरस मानिसबाट सर्ने भएकाले अरु मानिसहरुसित सम्पर्क नै नभए पनि धेरै हदसम्म सुरक्षित रहन सकिन्छ । हाम्रो समुदायमा धेरै वृद्धवृद्धा हुनुहुन्छ । कृपया घरबाट बाहिर कसैगरी ननिस्कनुहोला । खाना ल्याइदिने वा किनमेल गरेर ल्याइदिनेले पनि ढोकामै छोडिदिनुहोला । समाजबाट अलग रहने विधि (सोसल आइसोलेसन) कोरोना भाइरसबाट बच्न प्रभावकारी छ । कृपया अटेर नगरी पालना गर्नुभयो भने यो भाइरसबाट आफू पनि र अरुलाई पनि बचाउन सकिन्छ ।
(यो सामग्री कोरोना भाइरसबाट युकेमा रहेका नेपाली समुदायलाई सूचित र सचेत बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघले चलाएको अभियान अन्तर्गत तयार पारिएको हो ।)